ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ။ Linux မှ
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ
မနက်ဖြန်သည်တစ်နှစ်ပြီးဆုံးရုံသာမကဆယ်နှစ် (၁၀) နှစ်နှင့်ပထမနှစ် ၂၀ အတွင်းမနက်ဖြန်ဖြစ်သည် «Siglo XXI»။ ဒါပေမယ့်လက်ရှိလရဲ့စာပေတွေကိုအထူးရည်ညွှန်းပြီး၊ «diciembre 2019»ပုံမှန်အတိုင်းသတင်းအချက်အလက်တွေပေးတယ် အရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ထူးချွန်, အရမ်းများလွန်းတယ် မကောင်းဘူးလားထိုက်တန်သည် သတိရသို့မဟုတ်မီးမောင်းထိုးပြငါတို့သည်သင်တို့တစ် ဦး ဆောင်ကြဉ်းရန်မျှော်လင့်ပါတယ် အသေးစားနှင့်အသုံးဝင်သောပြန်လည်သုံးသပ် သူတို့ထဲကတချို့အားဖြင့်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအကျဉ်းချုပ်အပေါ်မျှော်လင့်ပါသည် ဘလော့ဂ်တွင်းနှင့်ပြင်ပ၌ကောင်းသော၊ ဆိုးသောနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော «DesdeLinux» အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများ၊ သတင်းများနှင့်ကမ္ဘာ့ဖြစ်ရပ်မှန်များမှပျောက်ဆုံးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည် «Software Libre», «Código Abierto», «GNU/Linux» နှင့်ဆက်စပ်သောအခြားအကြောင်းအရာများ «Informática y la Computación», အ «Actualidad tecnológica».
1 ဒီဇင်ဘာလ 2019 အနှစ်ချုပ်
1.1 FromLinux အတွင်းပိုင်း
1.2 FromLinux အပြင်ဘက်တွင်
ဒီဇင်ဘာလ 2019 အနှစ်ချုပ်
Firefox 71 ဗားရှင်းအသစ်ကိုဖြန့်ချိပြီးပြီ။ ၎င်း၏သတင်းများနှင့် Linux တွင်မည်သို့ထည့်သွင်းရမည်ကိုသိထားပါ။Mozilla က၎င်း၏ web browser "Firefox 71" နှင့် Android platform အတွက် firefox 68.3 ၏ mobile version အသစ်ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်။
၂၀၂၀ အတွက် MS Office အတွက်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်ဖြေ - Windows မှာရော Mac OS နဲ့ Linux မှာပါ၊ အခမဲ့ဖြစ်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့တခြားနည်းလမ်းတွေရှိတယ်၊ အနည်းဆုံးအခမဲ့ဖြစ်တယ်၊ လူတိုင်းကရုံးလုပ်ငန်းကိုအရည်အသွေး၊ ထိရောက်မှုနဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
Zorin OS 15.1 သည် Microsoft Office နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောသဟဇာတဖြစ်သည်: Zorin OS 15.1 သည်စီးရီး၏ပထမ ဦး ဆုံးအဓိက update ဖြစ်ပြီး Ubuntu 18.04 LTS ကိုအခြေခံထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည် Linux ၏ Kernel 5.0 ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သော hardware support အတွက်ဆိုလိုသည်။
Egrep: GNU / Linux ရှိ command ဥပမာများ: Egrep သည် tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ console command သည် grep ကို run နေသော -E option နှင့်ညီမျှသည်။eသည် "Extended regex" မှဆင်းသက်လာသည်။ ၎င်းသည် -E option ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့် egrep တွင်ထို option ကိုအသုံးမပြုဘဲနှင့် egrep တွင်ရှိသည်။
Rambler ကငင်းင်၏အပြည့်အဝပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ရုရှားရဲများသည်မော်စကိုတွင်ရုံးခန်းများကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်ရုရှားရဲအင်ဂျင်နီယာ Rambler က Nginx ဝဘ်ဆာဗာအတွက်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ပိုင်ဆိုင်သည်ဟုပြောဆိုပြီးနောက်တွင်မော်စကိုရှိ Nginx Inc. စက်ရုံကို ၀ င်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။
၂၆၇ သန်းခန့်သောဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူများသည်အချက်အလက်ဖောက်ဖျက်မှုကြောင့်ခံခဲ့ရသည်လုံခြုံရေးသုတေသီတစ် ဦး ဖြစ်သူ Bob Diachenko သည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အသုံးပြုသူ ၂၆၇ သန်း၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များပါရှိသောဒေတာဘေ့စ်တစ်ခုယိုစိမ့်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Facebook ကသင်၏တည်နေရာကိုမမျှဝေရန်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားသည်၊ သို့သော်၎င်း၏အခွင့်အာဏာကိုထပ်မံအတည်ပြုပြီးသင့်အား ဆက်၍ ခြေရာခံနေသည်Facebook သည်စာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ အခြေခံအားဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏တည်နေရာကိုအသုံးပြုခွင့်ပိတ်ပင်ထားလျှင်ပင်လူမှုကွန်ယက်သည်အသုံးပြုသူမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၎င်းကိုဖော်ထုတ်ရန်တတ်နိုင်သမျှပြုလုပ်သည်။
Grinch သည် Visual Studio Code ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးခရစ်စမတ်ကိုခိုးသည်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည်သူ၏ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အယ်ဒီတာဖြစ်သော“ Visual Studio Code” တွင်အနည်းငယ်တောင်းပန်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်။ Github မှစိတ်ရှုပ်စေသောပုဂ္ဂိုလ် (@ Christian-Schiffer) သည်ခရစ်စမတ် ဦး ထုပ်ကိုမကျေနပ်ကြောင်းဖော်ပြသည့်ချည်ကိုဖွင့်လိုက်သည်။
OSGeoLive - geolocation အလုပ်များအတွက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြေ - Live mode မှာဒီလို geo အလုပ်တွေအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ distro တစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်း၏အမည်မှာ OSGeoLive ဖြစ်ပြီး Lubuntu ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ OSGeoLive သည်၎င်း၏အနည်းငယ်သော retro interface ကိုဖော်ပြပေးသည်၊ သို့သော်အရူးလုပ်မထားပါနှင့်၊ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အံ့သြဖွယ်ရာများကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။
Elementary OS 5.1 Hera အသစ်ရပြီဖြေ - လူကြိုက်များတဲ့ Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း "Elementary OS" သည်အသစ်စက်စက်သက်တမ်းတိုးထားသော Elementary OS 5.1 နှင့်အတူ Hera အမည်ရှိသောဗားရှင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း။ ပြီးတော့အဲဒါဟာ system ကိုအရေးကြီးတဲ့အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
Ubuntu တိုးတက်ရန် Canonical သည်သင်၏အကူအညီလိုအပ်သည်လူကြိုက်များသော Ubuntu ဖြန့်ချိမှု၏နောက်ကွယ်မှကုမ္ပဏီ Canonical သည်လူထု၏အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုလက်ရှိထုတ်ဝေမှုများထက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်စစ်တမ်းတစ်ခုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
GNU HEALTH: ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ကိုစတင်ရန်အသစ်သော patch 3.6.2 နှင့်အတူ။ GNU Health သည်အခမဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးရုံစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အစိုးရများအတွက်ရည်ရွယ်သည်။
Linux ကို 20 တွက်ချက်- Gentoo-based စီမံကိန်း၏ distro set ကိုဒီအဓိက update ကိုထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပြီး KDE Plasma, Cinnamon, LXQt, MATE နှင့် Xfce အရသာတွေမှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီဖြန့်ချိမှုက package များစွာကို update လုပ်ပြီး i686 architecture ကိုလည်းဖယ်ရှားသည်။
EasyOS ၂.၂ဖြေ - Puppy Linux ရဲ့ရှေ့ပြေးနည်းပညာများနှင့်အထုပ်အမျိုးအစားများစွာကိုသုံးသောစမ်းသပ် Linux ။ ဖြန့်ဖြူးခြင်းတွင်ထုံးစံအတိုင်း Easy Containers ဟုခေါ်သောထုံးတမ်းစဉ်လာတစ်ခုရှိပြီး၎င်းကို applications များသို့မဟုတ် desktop environment တစ်ခုလုံးကို container တစ်ခုတည်းတွင် run နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးထုတ်ဗားရှင်းကို Debian 10 packages များ အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်သည်။
Ferenn OS ကို 2019-12ဖြေ - Linux Mint ကိုအခြေခံပြီး Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ ဤစီမံကိန်းသည် KDE Plasma desktop အားမူလအတိုင်းထည့်သွင်းရန်စီမံကိန်း၏ပထမဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်။ Cinnamon ပါ ၀ င်သော "Classic" ထုတ်ဝေမှုကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
AntiX 19.1ဖြေ - IceWM ကိုပုံမှန် ၀ င်းဒိုးမန်နေဂျာအဖြစ်ထည့်သွင်းထားတဲ့ပေါ့ပါးတဲ့ Linux ဖြန့်ဖြူးမှုအသစ်ကိုထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့် bugfix ဖြန့်ချိမှုဖြစ်သော်လည်း၎င်းထုတ်လွှတ်မှုအသစ်သည် IceWM ကို version 1.6.3 သို့အဆင့်မြှင့်သည်။
EndeavorOS 2019.12.22Arch Linux ကိုအခြေခံပြီးဆက်တိုက်ဖြန့်ချိတဲ့ Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ ပရောဂျက်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းသည်အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းတပ်ဆင်မှုများဖြစ်နိုင်ချေကိုမိတ်ဆက်သည်။
လ၏အခြားထုတ်ပြန်ချက်များ: LinuxConsole 2019, NuTyX 11.3, Alpine Linux 3.11.0, Emmabuntüs DE2-1.06၊ Peppermint 10 Respin (20191210), 4MLinux ၃၀Minimal Linux Live (MLL) - ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်၊ robolinux 10.6, ArcoLinux 19.12.15, NomadBSD 1.3, Elive 3.8.1, Univention Corporate Server (UCS) 4.4-3, Tails 4.1, Elementary OS 5.1, NetBSD 9.0 RC1 နှင့် CAINE 11.0 ။
ပထမ၊ မင်္ဂလာနှစ်သစ် 2019 စာဖတ်သူအားလုံး၊ သုံးစွဲသူများနှင့်ဘလော့ဂ် ၀ င်များအတွက်နှင့်က အောင်မြင်သော ယခုနှစ် 2020 ၏အစ။ ပုံမှန်အတိုင်းအနားယူပါ၊ ဤ "အသုံးဝင်သောနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်" မီးမောင်း ဘလော့ဂ်အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက် «DesdeLinux» ၏လအဘို့ ဒီဇင်ဘာလ 2019တစ်ခုလုံးအတွက်, အလွန်အကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်များအတွက်အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ applications များနှင့်ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့မှကြီးသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အတော်ကြာ » ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ - အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ
Pedro Perez အားပြန်ပြောပါ
Pedro! သင်သေချာပါသည်၊ သို့သော်ပုံစံ (၂) မျိုးသည်လူမှုရေးအရလက်ခံပြီး RAE မှပင်လက်ခံသည်။
RAE သည်ဆယ်စုနှစ် ၁ ခုမှအဆုံးသတ်သည့်နှစ်များအတွင်းစတင်သည်ဟုညွှန်ပြသော်လည်း၊ 1 သည်ဆယ်စုနှစ်၏နယ်နိမိတ်အဖြစ်လက်ခံသည်။ ၎င်းသည် ၁၀ နှစ်နှင့်ညီသောဆယ်စုနှစ်နှင့်အဓိပ္ပာယ်တူရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်သင်၏အလွန်ကောင်းမွန်သောလေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့် RAE မှတင်ပြသောအချက်များကိုလေးစားခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ဝါကျကိုအနည်းငယ်သာပြုပြင်ခဲ့သည်။
BlackArch 2020.01.01 ဗားရှင်းအသစ်ရောက်ရှိလာပြီးယင်းသည်၎င်း၏သတင်းများဖြစ်သည်
Easy OS - Puppy Linux ကိုတီထွင်သော distro